Mandalay (unspecified township) | Burma Election Tracker
Mandalay (unspecified township) No voter education in Mandalay Division (ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးမှုမရှိပါ။)
A citizen in Mandalay Division told Burma Election Tracker, "I voted for USDP because I didn't know which party to vote for. There was no voter education."
ဘယ်ပါတီပေးရမည်မသိသဖြင့် ခြင်္သေ့(USDP)အားပေးလိုက်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးမှုမရှိပါ။
Voter from Mandalay boycotts election / မဲမပေးခြင်းဖြင့်၂၀၁၀ရွေးကောက်အားသပိတ်မှောက်ပါသည်။
A voter from Mandalay Division who spoke to Burma Election Tracker said: "I boycotted the 2010 election and I know very few people voted."
Members of USDP canvasses for votes in polling stations on election day / USDP ပါတီဝင်များမှမဲရုံအတွင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း။
Citizens inside Burma have reported to Burma Election Tracker that inavillage in Mandalay Division, members of the USDP canvassed for votes at the village polling station by offering flags, pamphlets and by asking openly and candidly to vote for their party until noon of election day.
ရွာအတွင်းရှိမဲရုံ၌ ကြံခိုင်ရေး(USDP)ပါတီဝင်များသည်မဲလာပေးသူများအားအလံများပေးခြင်း၊လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့် ဝေခြင်း၊ပါတီအားမဲပေးရန်ဗြောင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းများကိုနေ့ လည်(၁၂)နာရီထပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
Village authority brings voters to his office to collect forced advance votes for USDP / ကျေးရွာအာဏာပိုင်မှUSDPအတွက်ကြိုတင်မဲထည့်ခိုင်းခြင်း။
Inside networks reporting from Burma told Burma Election Tracker that in Mandalay Division, the president ofalocal Ward Peace and Development Council (also the president of the same village's election commission), called the villagers to his office one day before the election and asked more than 500 people to vote for USDP in front of him.
(------x)အတွင်းရှိ (-----x)ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဥက္ကဌလည်းဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သူမှကျေးရွာသားများအားရုံးသို့ ခေါ်ယူကာUSDP ပါတီအတွက်၎င်းရှေ့ မှောက်တွင်လူ၅၀၀ကျော်ကိုထောက်ခံမဲပေးစေခဲ့ပါသည်။
Village authorities in Mandalay Division threaten absentee voters with prison anda$100 fine / ကျေးရွာအာဏာပိုင်မှမဲပေးရန် ဥပဒေမဲ့အာဏာသုံးခြိမ်းခြောက်ဖိအားပေးခြင်း။
Inside networks operating in Burma have reported to Burma Election Tracker thataPresident of Ward Peace and Development Council (village authorities) in Mandalay Division spoke fromaloudspeaker and told all the villagers to come and vote and that the absentees would be punished with one year imprisonment and fined 100 000 Kyats (nearly 100 $).
Uneducated voters assisted by USDP and tricked into voting for the party
Inside networks reported that uneducated voters at polling stations in the Mandalay division were asking for help on how to vote and that the USDP assisted them by ticking USDP on ballot slip and then directed them to vote.
မန္တလေးတိုင်း ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် (က) ရပ်ကွက် တွင်စာမတတ်တဲ့ လူတွေ ကမဲပေးချင်လို့ မဲရုံကို လာတော့ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိလို့ မဲရုံကလူတွေကိုမေးတော့ မဲရုံကလူတွေက ကြံ့ဖွံ့ကိုဘဲ အမှန်ခြစ်ပေးပြီးထည့်ခိုင်းကြောင်း မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့။
Voter in Mandalay Division felt pressured to vote for USDP because USDP representatives were at the polling place watching him vote
A voter in Mandalay Division spoke to Burma Election Tracker and said, "I was not free to vote. USDP was watching us vote, so I voted for them. Also, I did not have enough knowledge about the election."
Many voters throughout Burma reported USDP candidates violating election laws by campaigning in polling places or intimidating voters by watching them closely while they cast their ballots.
မဲပေးရတာမလွတ်လပ်ပါ၊ USDP များစောင့်ကြည့်နေသဖြင့် USDP အားမဲထည့်လိုက်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းလဲ နားမလည်တာပါပါသည်။
Citizen in Mandalay Division chooses to boycott election because of unfairness သပိတ်မှောက်၍မဲမပေးကြ
A voter spoke to Burma Election Tracker and said: "We boycotted and did't vote because of unfairness."
Throughout Burma, some citizens exercised their right to boycott the election and not vote.